WAA MAXAY FARQIGA U DHEXEEYA DABOCASE SONKORTA IYO KANEECADA - FARQIGA U DHEXEEYA NOOCYADA ARAGGA, MUUQAALKA IYO DABEECADAHA KALE, SHARAXAAD, SAWIR, SIDA LOO DOORTO KHUDRADDA UGU WANAAGSAN? - BEER CAGAARAN
Isbarbardhig sadex nooc oo xididdo: sonkorta, miiska iyo cawska - sida ay u kala duwan yihiin? Sharaxaad, sawir iyo miis
Beerta waxaa loo adeegsadaa karinta, waxaana loo isticmaalaa wax soo saarka, laakiin cid kastaa way ogyihiin sida loo kala saaro, tusaale ahaan, sonkorta laga bilaabo calafka.
Waa maxay sababta noocyada calafka "loo bixiyey" xayawaanka, sonkorta waxaa laga soo saaraa xididdo sonkor ah, iyo sidee loola baxaa caadiga ah noocyo kale oo caan ah?
Hoos waxaa ku qoran faahfaahinta kala duwanaanta kala duwanaanshaha noocyada kala duwan ee xidigaha, kuwaas oo lagu soo bandhigi doono qaab miiska ku haboon.
Waxaa jira noocyo badan oo xididdo, laakiin waxaa jira kuwa inta badan loo isticmaalo nolol maalmeedka.
Waxaa jira saddex nooc oo kaliya:
Rugta caadiga ah (qolka cuntada).
Beerka caadiga ah oo loo yaqaano dhammaan xafladaha: waxay ka timaadaa iyada oo cambarisku karsado iyo kariyo suxuunta; Sidaa darteed magaca - qolka cuntada. Miraha waa caddaan iyo guduud, laakiin waxaan u yeernaa kala duwanaanta beetroot ee midabka caadiga ah casaan. Ma jiro foom la hubo oo ay suurtagal tahay in la kala saaro xayawaanka caadiga ah ee ka soo baxa kaniisadaha.
Waxaa badanaa loo qaybiyaa noocyo kala duwan:
Vindifolia (qaab dhismeedka casriga ah ee dalagyada awoodda leh ee awoodda leh, caleemaha cagaaran iyo petioles, midab yar oo casaan leh).
Rubrifolia (wareega, flat, miro yar oo casaan ah, caleemo isku mid ah).
Atrorubra (xididdada madow-midabada leh, caleemaha cagaaran ee dhalaalaya leh xididada casaanka ah ee cas, casaan ama casaan, petioles oo kala-duwan).
Dabocase sonkorta - dhaqanka farsamada oo ku jira sonkorta 20%. Xiddaha sonkorta waxaa loo isticmaalaa ugu horreyn siinta sonkorta. Laga soo bilaabo ka hadhay waxay abuuraan Bacriminta iyo jinka madow ee lagama maarmaanka u ah qoyaan. Qeybta ayaa tagta xoolaha. Miraha sonkorta sonkorta waa ciriiri, ciriiri, caleemaha cagaarka ah ayaa loo habeeyay on petioles dheer. Wuxuu koraa, maaha inuu ka soo baxo caanaha uurjiifka dhulka.
Dabocase calafka - loogu talagalay xayawaanka noocyada quudinta xayawaanka. Lagu heley magaca sababtoo ah hantidooda gaarka ah. Digriiga quudinta ayaa si fudud ugu wareersan qolka cuntada, laakiin waxaa jira tiro muuqaal ah. Tusaale ahaan, quudinta had iyo jeer waa wareegsan ama oval, oo leh casaan ama casaan. Waxay gaari kartaa illaa shan iyo toban kiilo oo miisaankeedu yahay, oo ka sarraysa dhulka koritaanka, korka miro ayaa la arki karaa.
Halkan sawirada waxaad arki kartaa sonkorta aragti ka duwan, xididada caadiga ah iyo cawska:
Waa maxay faraqa u dhexeeya noocyada?
Shuruudaha isbarbardhigga Aft Biyo (qolka cuntada) Sonkor
Midabka: casaan, casaan, casaan.
Dabool: wareegsan, cylindrical ama oval.
Dhirta: qaro weyn.
Leaves: yar yar, dhalaalay, cagaar, cillad.
Midabka: carmine-red, burgundy mugdi ah, caddaan, midabo iftiin ah.
Foomka: qoob-ka-xayndaaban, isku-dhafan, xarrago leh, cylindrical, mil-shaped.
Leaves: weyn, dhaldhalaalaan, marar badan leh dhirta casaan.
Midabka: caddaan ama huruud ah, iftiin kale oo iftiin leh.
Dhirta: qaro, cagaar.
Leaves: yaryar, khafiif ah oo aan caleenta lahayn, oo cagaar ah, cagaaran cagaaran.
Protein: 9 garaam.
Carbohydrates: 5-8 garaam.
Protein: 1.7 garaam.
Carbohydrates: 8 garaam.
Protein: 0.12 garaam.
Carbohydrates: 20 garaam.
Shuruudaha ciidda Waxaa loo baahan yahay bacrin ah. Haddii ciidda saboolka ah, bacarimiso iyo dalacsiinta bacriminta waa qasab. Waa suurad wacan in horay loo sii waday baalal beereedka koraan hadhuudhka iyo digirta, khudradda, badarka. Chernozem, alkaline iyo carrada yar ee alkaline waa la soo dhaweynayaa. Joogitaanka ciidda dabacsan oo bacrin ah. Xayawaanka madam iyo lo'du waxay u fiican yihiin noocyadan. Qulqulku waa mid aad u muhiim ah (waa inay ahaataa mid dhexdhexaad ah ama waxoogaa alkaliin ah). Waxaad ma beeri kartaa abuurka abuurka on sariiraha, kuwaas oo sameeyey digada cusub. Hawada iyo qoyaanka waa in si fudud loo dhex maro ciidda loogu talagalay xididada sonkorta. Cadaadiska ciidda, oo heysta biyo qoto dheer oo ah 0.6-0.8 mitir, ayaa fududayn doona beerashada oo ka dhigaya mid aad ufiican, iyo beetroot - tayada. Xayawaanka sida chernozem, peatlands iyo sierozems ayaa ku habboon. Waxaa lagugula talinayaa in ariiyada xilliga qaboobaha iyo qamadida ay tahay in la koro meeshii beero ka hor inta aan dhalada sonkorta.
Yield Daryeelka haboon, dhalidda waxay gaari kartaa laba iyo toban ama toban miro oo hektar ah (30-60 ton). Gaar ahaan noocyo kala duwan oo la kala soocay:
Ekkendorfsky dabocase huruud ah.
Afartan iyo konton tii hektarba waxay gaartaa dabocase leh daryeel caafimaad leh. Noocyada hogaaminta:
Kala doorashadu waxay udhaxeysaa noocyo badan oo macaan, ama noocyo sonkor leh, laakiin ma jiro wax ku tiirsanaan ah oo u dhexeeya iyaga (qiyaastii 18-30 tan hektar). Natiijada ugu fiican ayaa lagu arkay noocyo kala duwan:
Bartilmaameed: Dabocase calafka - caan dabiici ah. Iyada oo ay ku jirto maaddada borotiinka sarreeya, waa iyada oo tagta xayawaanka. Tayada dhalidda caanaha ayaa korodhay. Breeders ayaa muddo dheer la halgamay si ay u helaan dhadhan jilicsan oo qurux badan oo xididdo. Miisaanka miiska waxaa si gaar ah loo abuuray oo loo koray miiska bini'aadamka. Waxay leedahay dhadhanka ugu fiican. Dabocase sonkorta waxaa si weyn loo isticmaalaa wax soo saarka sonkorta iyo macmacaanka madoobaha. Waa khayraadka ugu weyn ee Russia ka yimid sonkorta la sameeyey.
Wakhtiga dhirta Celcelis ahaan, xilliga dhirta ee dabocase calafku wuxuu soconayaa 4-5 bilood. Waxay ku jirtaa burooyinkeeda jaalaha ah, oo ay ku jiraan laba illaa lix ubax yar yar. Xilliga sii kordhaya ee noocyada Bisaylkiisa hore waa 2-3 bilood; Noocyada bartamihii bartamihii waxay u bislaadaan 3-4 bilood, iyo noocyo goor dambe waxay leeyihiin xilli sii kordhaysa muddo ka badan 100 maalmood (in ka badan saddex ama afar bilood). Faseexu wuxuu noqonayaa khudradda cagaaran ee 5-6 bilood. Luqad kasta (whorl) 2-6 ubaxyo cagaaran-cagaaran yar yar.
Daryeelka iyo farsamada sii kordhaya Loosening of ciidda waxaa lagu fuliyaa ka dib markii roobab, dhowr maalmood ka dib markii laga beerto. Ilaa iyo inta dusha daboolka aan xirneyn, xakamaynta cawska ayaa la fuliyaa: waxaan u baahan nahay inaynu dhowr jeer ku dhajino inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Hal bil ka hor dhirbaaxo, waxay ku haboon tahay in laga takhaluso gebi ahaanba waraabinta. Marka roobab culus oo u dhexeeya sariiraha abuuraan meelo kala duwan oo biyo ah. Si looga hortago cayayaanka isticmaal Bacriminta macdanta, iyo ka hor inta beerto beedka ee ciidda samee nitroammofosku. Marka ugu horeysa ee koritaanka, waxaad u baahan tahay inaad ku quudiso sprouts leh nitrogen, ka dibna u beddel xeryaha potash (ash qoryaha). Beetada waxay jecel yihiin qoyaan waxayna u baahan yihiin waraabin joogto ah, laakiin waa muhiim inaad ka fogaato kor-u-kicida. Marka sprouts ay sameeyaan caleen labaad, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo si loo dabciyo ciidda. Isla mar ahaantaana, geedo waa la dhimi karaa. Khafiifinta labaad ayaa lagu taliyaa Luuliyo, isagoo 10 centimitir u dhexeeya caleemaha. Inkasta oo ay geedo soo baxaan oo koraan, waxay sameeyaan laba khafiifin oo isku xiga (shan ama lix sintimitir ah marka hore iyo shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban). Ka dib markii beero si degdeg ah u baahan yihiin inay ku shub badan xididdo. Best of xididdo sonkor ah waxaa loo arkaa waraabka, rushayn ku habboon. Waa inaanan hilmaaminin jaridda dhirta. Si aad u ilaaliso xididdo ka soo cayayaanka, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, fangasaska "Fitosporin" iyo fitoverm intixitsid "Fitoverm" waxaa loo isticmaalaa si kale.
In si faahfaahsan ku saabsan kala duwan ee dhexe-dhirta dabocase calafka Ekkendorfskaya akhriyo in maqaal gooni ah.
Doorashada nooca khudradda waxay ku xiran tahay ujeedada codsigeeda.
Haddii xididdo loo isticmaali doono inta badan cunto karinta, waa inaad doorataa xididdo. Dhadhaminta dhadhanka iyo qandhicilka ayaa ka dhigi doonta wax kasta oo xamaasad leh oo qurux badan. Iyada oo ku saleysan dabocase cas, gumaadka ugu fiican waxaa la helay, saladh laga sameeyey caleemo. Faa'iidooyinka ka ilaalinta birta culus ayaa laga sooci karaa guryaha faa'iidada, waxay ka saartaa kolestarool waxayna caawisaa ka hortagga cudurrada caloosha. Beetroot waa nooca ugu wanaagsan ee dabocase.
Xubnaha sonkorta ayaa la cuni karaa; dadka jecel cuntooyinka macmacaanka ah iyo suxuunta waxay ku daraan halkii ay ka cuni lahaayeen. Xabbad sonkor leh ayaa leh tiro guryaha ah oo faa'iido leh:
waxay hagaajinaysaa dheef-shiid kiimikaad (kor u qaadista miisaanka, inkastoo heerka sonkorta sare);
nadiifiyaa oo dibudhisid jirka;
waxay hagaajineysaa shaqeynta qanjirka thyroid;
Waxay leedahay saameyn liddi ku ah bararka iyo ka hortagga.
Dabocase sonkorta - dukaanka nafaqooyinka iyo fitamiinada.
Digirta quudinta ma aha mid ku habboon bini-aadanka, laakiin ku haboon xayawaanka. Waxaad ku guuleysan kartaa guusha weyn ee dhalidda caanaha, haddii aad quudinayso dabocase lo'da. Waxay sidoo kale u adeegtaa ilaha fitamiinada iyo macdanta xilliga jiilaalka. Dabocase calafka sidoo kale waa qalab loogu talagalay shaqada ah ee jilayaasha (waxay ahayd sonkorta iyada oo laga soo saaray).
Dabocase dabiiciga ah waa qaabka ugu wanaagsan ee lagu quudiyo xayawaanka si loo helo caano badan iyo caanaha caafimaadka (waxaad ku baran kartaa waxyaabaha gaarka ah ee isticmaalka xayawaanka dabiiciga ah ee dabiiciga ah)
Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya dabocase calafka iyo dabocase sonkorta joogto ah:
cabbirada (sida caadiga ah xayawaanka);
booska (quudinta "falka");
dushooda (waa wax qaro weyn oo aad u qurxoon ee cawska);
ujeedada (quudashada koray xayawaanka, makhaayadda iyo sonkorta waa la cuni karaa);
Waxyaabaha kiimikada ah (waxay ku jiraan siddeed jeer oo ka badan borotiinka);
dhadhanka (dhadhanka xun);
qaabka uurjiifka (noocyo kala duwan oo ka duwan sida dabocase, waa sahlan tahay in la aqoonsado).